Amazon files kaadị metụtara patent maka data iyi - Blockchain News
Amazon meriwo a patent maka a gụgharia data n'ọma ahịa na ike ekwe debanyere aha na-enweta ezigbo oge cryptocurrency azụmahịa data.
Amazon si patent akọwa a usoro nke onye data iyi nwere ike ịbụ ya mere bara uru na ha onwe ha, iji Bitcoin na cryptocurrency azụmahịa data dị ka ihe atụ. Ma site na ijikọta a data na ozi sitere na ndị ọzọ na isi mmalite, “ndị data iyi nwere ike ịghọ ihe bara uru.”
The patent ekwu: “Ọmụmaatụ, a ìgwè nke electronic ma ọ bụ internet Jeriko na-anabata Bitcoin azụmahịa nwere ike a mbupu adreesị nke ahụ nwere ike correlate na Bitcoin address. The electronic Jeriko nwere ike ikpokọta na mbupu adreesị na Bitcoin azụmahịa data ike mekọrịtara data na republish ndị jikọtara data dị ka a jikọtara data iyi.”
ga- 2019 be the Year that SAV...
Litecoin - ga- 2019 Be A Huge...
Previous Post:Insurance ore Marsh-arụ ọrụ na IBM on Blockchain n'elu ikpo okwu
Next Post:Korean kaadị mgbanwe amalite onwe ụkpụrụ mgbalị
Ka 15, 2018 na 12:18 PM